नकारात्मक भूमिकामा देखिने भए अभिनेता सरोज खनाल : के दर्सकको साथ पाउलान त ? - Glamorous Icon
Home›GIcon News›नकारात्मक भूमिकामा देखिने भए अभिनेता सरोज खनाल : के दर्सकको साथ पाउलान त ?
अभिनेता सरोज खनाल अहिले पहिला भन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । चलचित्र ‘प्रेम गीत’ पछि सरोजले नायक–नायिकाको बुवाको भूमिका रोजिरहेका छन् जसलाई दर्शकले पनि निकैनै मन पराएका छन । हालै उनी खलनायकको भूमिकामा देखेने तरखरमा छन ।
निर्माण गरिरहेको चलचित्र ‘हिरो रिटन्र्स’ मार्फत सरोजको खलनायकी रूप बाहिरिएको छ । चलचित्रमा सरोजको भूमिकाका बारेमा कुनै जानकारी भने निर्माण युनिटले मिडियालाई दिन मानेको छैन । तर चलचित्र ‘हिरो रिटन्र्स’मा भने उनी नायिकाको दाजुको भूमिकाका प्रस्तुत भएको जानकारी चलचित्र यूनिटबाटै प्राप्त भएको छ ।
प्रस्तुत हुने भएका छन तर नकारात्मक भूमिकामा दर्शकले मन पराउछन या पराउदैनन यो प्रतीक्षाकै विषय हो । हेरौ दर्शकले कत्तिको रुचाउने हो , तर त्यो थाहा पाउन चलचित्रको प्रदर्शनको मिती सम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
आउने भो ‘होस्टेल ३’ : दुर्गिश फिल्मसले ...